खुल्यो हिल्सा नाका - समाचार - कान्तिपुर समाचार
खुल्यो हिल्सा नाका
जेष्ठ २, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
हुम्ला — हिमपातले बन्द भएको उत्तरी हिल्सा नाका खुलेको छ  । झन्डै पाँच सय मिटर उचाइको नारा लेकमा जमेको हिउँ पग्लेर स्थानीय आउजाउ गर्न थालेपछि नाका खुलेको हो  ।
चीनसँग सीमा जोडिएको हिल्सा नाका बर्सेनि हिउँदमा बन्द हुने र हिउँ पग्लेपछि खुल्ने गरेको छ । नाम्खा गाउँपालिका–६ को लिमीका बासिन्दाले घर फर्कने क्रममा यही मार्ग प्रयोग गरेपछि नाका खुल्न सहज भएको हो ।
लिमी आवतजावत गर्न दुई बाटा छन् । हिउँ कम हुने भएकाले हिउँदमा घर छाडेर गएका लिमीमा बासिन्दाले घर फर्कंदा जमेको हिउँ छिचोल्दै हिल्साको मार्ग प्रयोग गरपछि अरू पनि आवतजावत गर्न थालेका हुन् । नाका खुलेपछि हिल्सामा चौकी पनि पुनःस्थापना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिहर खडकाले बताए । वर्षाको समयमा चौकी स्थापना हुने र हिउँदमा आउजाउ बन्द भएपछि तलतिर सार्ने गरिन्छ । बाटो खुलेपछि कतिपय युवा रोजगारीका लागि तिब्बतको ताक्लाकोट गइसकेका छन् ।
नाका खुलेपछि हुम्लाको मार्ग भएर मानसरोवर कैलाश तीर्थ यात्राका लागि भारतीय तीर्थालु आउन थालेका छन् । भारतीय तीर्थयात्रीको व्यवस्थापनका लागि नेपाली गाइड तथा ट्राभल एजेन्सीका कर्मचारी सिमकोट पुगिसकेका छन् । सिमकोटका मध्यमस्तरका होटल पनि सञ्चालकहरूले सरसफाइ गरेर चिटिक्क बनाउन थालेका छन् ।
निजी हवाई कम्पनीले पनि उडान संख्या बढाउन थालेका छन् । स्थानीयका अनुसार कर्णाली करिडोरको हिल्सा सडक खण्डमा ७३ किलोमिटर सडकको ट्र्याक छ । नारालेकको हिउँ पूरै नपग्लेकाले यतिखेर गाडी भने सबैतिर गुड्न थालेका छैनन् । जमेको हिउँ छिचोलेर मानिस मात्र आवतजावत गर्ने गरेका हुन् । नाम्खा गाउँपालिकाका बासिन्दा पूरै तिब्बती बजारमा निर्भर छन् । हिउँदपछि बर्सेनि तिब्बतको मार्ग खुल्ने प्रतीक्षा गर्ने र मार्ग खुल्नेबित्तिकै तिब्बत गएर आफ्ना आवश्यक सामान खरिद गर्ने गर्छन् ।
हिल्सा नाकामा गत वर्ष अध्यागमन कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । हिउँदमा बन्द भए पनि नाका खुलेपछि भारतीय तीर्थयात्रु आउनुअगाडि नै कार्यालय पुनःस्थापना हुनुपर्ने हो तर नाका खुले पनि भन्सार र अध्यागमन दुवै कार्यालय पुनःस्थापना भएका छैनन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:३८
मेलम्चीमा बहुपक्षीय सहमति खोजिने
काठमाडौं — सरकारले प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालतलगायतसँग बहुपक्षीय छलफलमार्फत सहमति गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम अघि बढाउने भएको छ  । इटालियन कम्पनी फर्किन नमानेपछि छुट्टै ठेक्का प्रक्रियाबाट आयोजनाको बाँकी काम अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ  ।
बाँकी काममा कसैबाट अवरोध र विवाद नआओस् भनेर बहुपक्षीय सहमति जुटाउन लागिएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदा आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्ने उल्लेख गर्दै सरकारले सबैको संलग्नतामा निर्णय गर्ने विधि तय गर्न लागिएको बुधबार संसदीय समितिमा जानकारी गराएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले साताभित्र बहुपक्षीय सहमति जुटाएर बाँकी काम सुचारु गर्ने जानकारी दिए । ‘विपक्षी दलका नेता, महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोगन अनुसन्धान आयोग र अदालतसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं,’ प्रतिनिधिसभाको विकास समितिमा सचिव शर्माले भने, ‘चाँडै काम अघि बढाउँछौं ।’
मेलम्चीका सहायक ठेकेदार र भेन्डरहरूलाई गर्नुपर्ने १ अर्ब ५३ करोडको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकारले सर्वदलीय सहमति जुटाउन लागेको समेत उनले जानकारी दिए । सहायक ठेकेदार र स्थानीय भेन्डरहरूले डेढ अर्ब भुक्तानी नगरे काम अघि बढ्न नदिने दाबी गर्दै आएका छन् । विभिन्न बाधा र कानुनी अडचन हटाउन विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको सचिव शर्माले जानकारी दिए । बाँकी कामलाई १० वटा प्याकेज बनाएर एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सरकारले कार्ययोजना बनाएको पनि शर्माले बताए । मेलम्चीमा करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको काम बाँकी छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले एक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी ल्याइसक्ने गरी सहमतिको प्रक्रिया थालिएको बताइन् । सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई नै फर्काउने प्रयास असफल भएपछि छुट्टै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको उनले बताइन् । विकास समितिकी सभापति कल्याणी खडकाले मेलम्चीमा देखिएको अन्योल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन् । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ठप्प हुँदा राजधानीवासी निराश छन्,’ उनले भनिन्, ‘जसरी पनि काम अघि बढाउनुहोस्, समाधान खोज्नुहोस् ।’
मेलम्ची आयोजना रोकिएको विषयमा केही दिनअघि सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकभिक्रैका शत्तिहरू आयोजनालाई अघि बढ्न नदिन लागिपरेको आरोप लगाएका थिए । त्यसकै कारण आयोजना रोकिइरहेको भन्दै उनले ‘माथिबाटै’ हस्तक्षेप गरेर भए पनिआयोजना अघि बढाउने बताएका थिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:३७
उपसचिव र इन्जिनियरसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा
राजनीतिक हस्तक्षेप असह्यः देउवा
'खुला, निष्पक्ष र व्यवसायिक पत्रकारिताको पक्षमा लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ'
यौन दुर्व्यवहारका आरोपी शिक्षकलाई पक्राउ गर्न अदालतको अनुमति
एमसीसी अध्ययन कार्यदलले सुझाव मात्रै पेस गर्छ : परराष्ट्रमन्त्री
एनएमसी अस्पतालमा शल्यक्रिया गरिएका ३ जनामा 'गम्भीर संक्रमण', एकको अवस्था चिन्ताजनक
असमान, असहज र अव्यावहारिक
सम्पादकीय फाल्गुन ७, २०७६
‘नेपालबाट स्थलमार्ग हुँदै भारत प्रवेश गरी तेस्रो मुलुक उड्न नपाउने’ र नेपाली यात्रुको राहदानीमा भारत प्रवेशको अनिवार्य ‘इन्ट्री–परमिट’ रहेको अवस्थामा मात्रै दिल्लीसहितका अन्तर्राष्ट्रिय उडान नाकाबाट...
सात सालपछिको राजनीति
लोकराज बराल फाल्गुन ७, २०७६
२००७ सालको परिवर्तनले नेपाललाई एकैपटक नयांँ परिस्थितिमा पुर्‍यायो । अनेक आयाम थप्दै मुलुकलाई अति आधुनिक भनिएका मापदण्डमा हिँड्नुपर्ने परिस्थितिमा पुर्‍याएकोले नेपालीहरू अँध्यारोबाट उज्यालोमा पुगे । २००७ सालले...
ओली सरकारका बाँकी तीन वर्ष
टीका ढकाल फाल्गुन ७, २०७६
दुई वर्षअघि ठूलो बहुमतसहित निर्वाचित भएर सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नागरिकको अभूतपूर्व अपेक्षा गाँसियो । यसका तीन प्रमुख कारण थिए । पहिलो, दुवै जनआन्दोलनपछिको...
मलिलो भूगोलका अल्छी नागरिक
मञ्जु भट्ट फाल्गुन ७, २०७६
ओम गुरुङको स्वरमा सजिएको यो कालजयी गीतले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको बयान गरेको छ ।
महँगी बढ्न नदेऊ
सम्पादकीय फाल्गुन ६, २०७६
खडेरीका कारण केही महिनायता भारतमा बजार मूल्य अकासिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा परेको छ । अघिल्लो वर्ष पुसमा ८.३१ प्रतिशत घटेको तरकारी–गेडागुडीको मूल्यवृद्धि दर यो...
पार्टनर, तिम्रो पोलिटिक्स के हो ?
सरिता तिवारी फाल्गुन ६, २०७६
भारतका एक प्रखर कविको चर्चित कविता छ, ‘अंधेरे में’ । त्यसमा एउटा खरो वाक्य छ, ‘पार्टनर, तुम्हारी पोलिटिक्स क्या हैं ?’
प्रदेश ५ को राजधानी कहाँ ?
रघु पन्त फाल्गुन ६, २०७६
सदरमुकाम सार्ने वा नसार्ने भन्ने विषयमा पञ्चायतकालमा विभिन्न जिल्लामा तानातान र आन्दोलन हुने गर्थ्यो । अहिले देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि कतै प्रदेश नाम के राख्ने त...
कोरोना रोकथाममा मास्कको प्रभावकारिता
भानु न्यौपाने फाल्गुन ६, २०७६
धूलो र धूवाँबाट जोगिन पंक्तिकारद्वयले निकै पहिलेदेखि नियमित रूपमा अनुहार मास्क लगाउने गरिरहेका छौं । हामीले गत वर्ष मास्कले धूलोका कण कति प्रभावकारी ढंगले रोक्न सक्छ...
पर्यटक बरु थोरै आऊन्, खर्च धेरै गरून्
उषा थपलिया फाल्गुन ५, २०७६
नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को भव्य उद्‍घाटनको होहल्ला सेलाउन नपाउँदै एक पर्यटनकर्मीले दुखेसो पोखे, ‘अरू त कुरै छोडौं, युनेस्को विश्वसम्पदा सूचीभित्रका हाम्रा शौचालयको अवस्थाले नै यति...
कमजोर अनुमान क्षमता
विश्व पौडेल फाल्गुन ५, २०७६
अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थिति-हालै सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । आर्थिक मुद्दाहरू अब मुलुकको छलफलको केन्द्रमा आउँदै छन् । यसको उदाहरण प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा केही दिनअघि दिएको...